Tiro ho atemmusɛm (1-18)
23 Tiro ho atemmusɛm ni:+ Tarsis po so ahyɛn,+ muntwa adwo! Efisɛ wɔasɛe po so hyɛn gyinabea no; obiara rentumi nkɔ hɔ. Kitim asaase+ so na woyi kyerɛɛ wɔn. 2 Mo a motete mpoano asaase so, monyɛ dinn. Sidon+ aguadifo a wotwa po no ama woanya ahonyade bebree. 3 Sihor*+ hwiit* ne Nil nnɔbae faa nsu bebree so bae;Ɛno na ɛma onyaa ne ho,Na ɛmaa aman no nyaa mfaso.+ 4 O Sidon, wo a woyɛ ɛpo abannennen, ma w’ani nwu,Efisɛ ɛpo aka sɛ: “Mentee awo mu yaw da, na menwoo da;Menhwɛɛ mmerante, na mentetee mmabaa.”*+ 5 Sɛ nnipa te Tiro ho asɛm a, wobedi awerɛhow+Te sɛ bere a wɔtee Egypt ho asɛm no.+ 6 Muntwa mmra Tarsis! Mo a motete mpoano asaase so, muntwa adwo! 7 Enti mo kurow a mfiase pɛɛ, kyerɛ sɛ, kan tete no, na edi ahurusi no ni? Ná ne nan de no kɔ akyirikyiri kɔtena aman foforo so. 8 Hena na watu agyina yi atia Tiro,Tiro a osi ahene,A na n’aguadifo yɛ adehye,Nea wɔhyɛɛ n’aguadifo anuonyam wɔ asaase so nyinaa no?+ 9 Asafo Yehowa ankasa na atu agyina yiSɛ ɔbɛsɛe n’ahantan ne n’ahoɔfɛ nyinaa,Na wagu wɔn a wɔhyɛɛ wɔn anuonyam wɔ asaase so no nyinaa anim ase.+ 10 O Tarsis babea, kyin fa w’asaase so te sɛ Asubɔnten Nil. Ɛpo so hyɛn gyinabea biara nni hɔ bio.+ 11 Wateɛ ne nsa wɔ po so;Wawosow ahenni ahorow. Yehowa ahyɛ sɛ wɔnsɛe Foinike abannennen nyinaa.+ 12 Na ɔka sɛ: “Sidon babea, ɔbaabun a wɔahyɛ wo so,Worenni ahurusi bio.+ Sɔre, twa kɔ Kitim.+ Ɛhɔ mpo wo ho rentɔ wo.” 13 Hwɛ Kaldeafo+ asaase no! Ɛyɛ Kaldeafo na wɔama adan baabi a nkekaboa wɔ,Na ɛnyɛ Asiriafo.+ Wɔahyehyɛ wɔn akoban;*Wɔasɛe n’abankɛse,+Wɔadwiriw no agu pasapasa. 14 Tarsis ahyɛn, muntwa adwo,Efisɛ wɔasɛe mo abannennen no.+ 15 Saa da no, nnipa werɛ befi Tiro mfe 70,+ te sɛ ɔhene baako nkwa nna.* Mfe 70 awiei no, Tiro bɛyɛ sɛ tuutuuni bi ho dwom: 16 “O tuutuuni a nnipa werɛ afi wo, fa sanku kyin kurom. Bɔ wo sanku no yiye;To nnwom pii,Sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa bɛkae wo.” 17 Na mfe 70 awiei no, Yehowa betwa n’ani ahwɛ Tiro, na ɔbɛsan anya n’akatua,* na ɔne wiase ahenni a ɛwowɔ asaase so baabiara bɛbɔ aguaman. 18 Nanso ne mfaso ne n’akatua* bɛyɛ ade kronkron ama Yehowa. Wɔrenkora so, na wɔremfa nsie, efisɛ wɔde n’akatua* bɛma wɔn a wɔte Yehowa anim, na wobedidi amee na wɔahyɛ ntaade a ɛyɛ fɛ.+
^ Ebetumi aba sɛ ɛyɛ baali. Nt., “aba.”
^ Anaa “n’apaade.”